Vienna: Kulan uu Mareykanka ka maqanyahay oo lagu lafa gurayo nuclear-ka Iran - BBC News Somali
Vienna: Kulan uu Mareykanka ka maqanyahay oo lagu lafa gurayo nuclear-ka Iran
28 Luulyo 2019
Diblomaasiyiin sarsare oo ka socda dalalka Britain, faransiiska, Jarmalka, Ruushaka iyo Shiinaha, ayaa waxay magaalada Vienna kula kulmi doonaan dhigooda ka socda dalka Iran.
Diblomaasiyiintan ayaa maanta ka wada xaajoon doono sidii loo badbaadin lahaa heshiiskii nuclear-ka Iran ee sannadkii 2015-kii.
Xasaradda Gacanka ayaa cirka isku sii shareertay sannadkii la soo dhaafay, ka dib markii madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiskii taariikhi ahaa ee nuclear-ka Iran.
Heshiiska nuclear-ka ee Iran ayaa dunida jahwareer badan ka abuuray , oo xukuumadda Washinton ayaa iran dib ugu soo rogtay cuna-qabateeno ay ku ciqaabayso.
Cunaqabateentaasi ayuu Mareykanka uga gollahaa inuu ku wiiqo awoodda dhaqaale iyo dakhliga Iiraan soo galo.
"Iiraan oo tayaysay yuuraaniyaamteeda in ka badan intii loo xadeeyay"
Iran oo iyadana ka falcelisay cunaqabteenadaasi ayaa sare u qaadday uranium-keeda keydsan.
Waxayna ku hanjabtay in ay qaadi doonto tallaabooyin dheeraad oo ah oo ay ku casriyeynayso nuclear-keeda, waa haddii waddamada kale ee heshiiskaaskaasi saxiixay gaar ahaan dalalka Yurub ay iska dhaga tiraan oo ay gacan ka gaysan-waayaan cunaqabteenada Mareykanka uu ku soo rogay dalkooda.
Madaxa Midawga Yurub u qaabilsan siyaasadda dibedda ayaa iran ugu baaqay in ay hakiso casriyeeynta nuclear-keeda.
Si kastaba xasaradda ayaa cirka isku sii shareertay ka dib markii ay dheceen, dhacdooyin ay ka mid ahayd in Iran ay soo ridday diyaarad aan duuliya lahayn oo Mareykanka laga leeyahay taaso oo ay sheegtay in ay ku soo xadgudubtay hawadeeda ayna wax basaaseeyasay.
Dhacdadaasi ka dib, madaxweynaha Maraykanka ayaa amar ku bixiyay in weeraro dhanka cirka ah lagu qaado bartilmaameedyo ku yaala dalka Iran, balse go'aankaas si lama filaan ah uga laabtay markii ay diyaaradihii duqeynta fulin lahaa ay hawada gareen, sidoo kalena maraakiibta ay isu diyaariyeen hawlgalka.
Dhamaadkii toddobadkii tagayna, Iran ayaa qabatay Markab uu ka dul babanayay calanka ingriirska kaas oo la sheegay in ay uga falcelinayeen Markab iran ay leedahay oo ay Britain xeebta Gibraltar ka qabatay iyadoona UK ku doodayay in markabka shidaalka looga shakiyay in uu baal maray cunaqabteenadii Midowga Yurub ee Iran.
Balse Su'aasha is weydiinta mudan ayaa ah, maxuu isbedel ah oo uu soo kordhin karaa shirkaan u dhexeeya dalalkii qeybta ahaa heshiiskii niyukleerka iran ee 2015-kii?